विश्वका दश धनी बालक – .:: Alpabiram
प्रकाशित: माघ ५ , २०७४ Alpabiram Admin
slider | रोचक |
निःसन्देह विश्वमा केही यस्ता बालकहरु पनि छन् जो वयस्क महिला पुरुष हुनु अगावै विश्वमै धनी बनी सकेका छन् । यस्ता बालहरु कत्तिले आफ्नै सामथ्र्य, प्रतिभा र क्षमताका कारण धनी बनेका छन् भने कोइ आफ्ना अभिभावले प्रदान गर्ने सहयोगका कारण धनी बन्न पुगेका छन् । विश्वका धनी व्यत्तिवmहरुको चर्चा हामी जतासुकै सुनी रहेका हुन्छौँ तर आज हामी ती दश विश्वका धनी बालकहरु बारे चर्चा गरी रहेका छौँ ।
१) जेडन स्मिथ
जेडन स्मिथ अमेरिकन नायक तथा ¥याप्पर हुन् । उनी हलिवुडका चर्चित नायक विल स्मिथ र जदा पिँकेट स्मिथका सन्तान हुन् । उनले पहिलो पटक सन् २००६ मा आफ्ना बुवासँगै ‘द पस्र्युट अफ ह्याप्पिनेस’ मा अभिनय गरी चर्चाका कमाएका थिए । जेडनले आफू ७ वर्षको छँदै आफूले सक्ने सामान्य काम गर्न सुरु गरेका थिए भने आफ्ना लागि आफैले खर्च जुटाउन थालेका थिए । उनको वार्षिक आम्दानी ९० लाख छ भने केही रुपैयाँ उनका आमाबुवाले समेत उनलाई दिने गरेका छन् । स्मिथ परिवारको वार्षिक आम्दानी भने ५५ करोडको रहेको छ ।
२) डेनिलिन मार्सल
डेनिलिन मार्सल अमेरिकी बालक मोडेल हुन् जसले रियालिटी श्वो तथा टेलिभिजन नाटकहरुमा अभिनय गर्दछिन् । उनी चर्चित दिवङ्वगत नायिका तथा मोडेल अन्ना निकोल स्मिथकी छोरी हुन् । आफ्नी आमाको पाइलालाई पछ्याउँदै उनले मोडलिङ क्षेत्रमा आफूलाई शसक्त रुपमा उभ्याएकी छिन् । उनको वार्षिक आम्दानी १ करोड रहेको छ ।
३) सुरी क्रुज
११ वर्षे सुरी चर्चित नायक टोम क्रुज र नायिका तथा मोडेल केट मोम्सकी सुपुत्री हुन् । उनका पिताले उनकी आमासँग सम्बन्ध विच्छेद गरेकाले सुरी अहिले आफ्ना पितासँग छैनन । उनका बुवाको आम्दानी वार्षिक ५० करोड छ भने आमाको साढे २ करोड रहको छ । तर सुरी पनि बाल कलाकारको रुपमा विभिन्न चलचित्र तथा नाटकरुमा अभिनय तथा मोडलिङ गर्न थालेकीले उनले वार्षिक रुपमा कमाउने पैसाले उनलाई विश्वका १० धनी बालक मध्येको एक बनाएको छ ।
४) भ्यालेन्टिना पिनल्ट
भ्यालेन्टिना निकै सम्पन्न परिवारमा जन्मिएकी बालिका हुन् । उनको बुवाको १५ अर्बको सम्पति छ भने आमाको ८८ करोडको सम्पति रहेको छ । खासमा भ्यालेन्टिनाको आफ्नै कमाइको रुपमा कुनै सम्पति नभएपनि उनका आमाबुवाले १ करोडको सम्पति उनका नाममा गरिदिएका छन् । ७ वर्षिय बालकको नाममा त्यो सानो सम्पति भने होइन । उनले अँझ आफ्नो नाममा थप सम्पति पाउने प्रबल सम्भावना छ भने साढे दुई करोड सम्पतिको कोष उनको नाममा स्थापना गरिएको छ ।
५) गेट्स सन्तान
बिल र मेलिन्डा गेट्सका तीन सन्तान रहेका छन् जसमध्ये २ छोरी र एक छोरा छन् । बिलको वार्षिक आय कुल ८५ अरब हो भने मेलिन्डाको ५१ अरब रहेको छ । जसमध्ये उनीहरुले आफ्नो आयको बढी भाग दानमा दिने गरेका छन् । उनीहरुले प्रत्येक सन्तानलाई २१ वर्ष पुगेपछि भोगचलन पाउने गरी ५ करोड सम्पति प्रत्येक सन्तानका नाममा गरिदिएका छन् । बिल गेट्सको अवसान पछि उनको सारा सम्पति पनि सन्तानले ने उपभोग गर्न पाउने भएकाले गेट्सका सन्तान पनि हाल विश्वका १० धनी बालक मध्ये परेका छन् ।
६) रिड, इभ र एरिन जब्स
जसलाई एप्पल साम्राज्यका सन्तानका रुपमा चिनिन्छ, रिड, इभ र एरिन जब्स दिवङ्गत स्टिभ जब्सका सन्तान हुन् । मृत्यु भएको समयमा स्टिभ जब्सको आम्दानी दुई करोड रहेको थियो भने त्यो सबै सम्पतिको हकदार उनकी श्रीमति लरेन पवेल बनेकी थिइन् । स्टिभ जब्सले मृत्यु हुनुपूर्व आफ्नो अधिकांश सम्पति तीनवटै सन्तानको नाममा कोषका रुपमा संचय गरिदिएका थिए । औपचारिक रुपमा उनीहरुको कुल सम्पति कति भन्ने बारे यकिन नहुन सकेपनि करिब २ करोढ सम्पति प्रत्येक सन्तानको नाममा रहेको अनुमान गरिएको छ । स्टिब जब्सकी श्रीमतिको मृत्य् पश्चात् उनको नामको सम्पति पनि सन्तानको नाममा जाने बताइएको छ ।
७) जर्ज एलेक्जेन्डर लुइस
क्याम्ब्रिजका राजकुमार जर्ज एलेक्जेन्डर राजकुमारी विलियम र राजकुमारी क्याथेराइनका एकमात्र सन्तान हुन् । राजकुमार विलियमको विवाह समारोह विश्वमा एकसाथ टेलिभिजनमा धेरै मानिसहरुले एकैसाथ हेरिएको पहिलो समारोह हो । उनको छोरा राजकुमार जर्ज एलेक्जेन्डर जन्मिएसँगै त्यो परिवारलाई अँझ धेरै मानिसहरुले दिन प्र्रतिदिन जान्न चाहिरहेका छन् । राजकुमारका नाममा रहेको सारा सम्पति नव राजकुमारको जन्मसँगै उनकै नाममा हुने भएकाले जर्ज पनि विश्वका १० धनी बालकको सूचिमै रहेका छन् ।
८) अबिगेल ब्रेसलिन
LOS ANGELES, CA – DECEMBER 16: Actress Abigail Breslin arrives at the Los Angeles Premiere “August: Osage County” at Regal Cinemas L.A. Live on December 16, 2013 in Los Angeles, California. (Photo by Jon Kopaloff/FilmMagic,)
उनले ३ वर्षको हुँदै फिल्म तथा मोठडलिङमा आफ्नो करियर सुरु गरेकी हुन् । त्यसको दुई वर्षपछि उनले २००२ मा साइन भन्ने फिल्ममा पहिलो पटक अभिनय गरेकी थिइन् जुन फिल्म हलिवुड बक्स अफिसमा निकै चर्चामा रह्यो । जब २००६ मा लिटिल मिस सनसाइन भन्ने कमेडि ड्रामामा अभिनय गर्न थालिन् उनको चर्चा एकाएक चुलिएको थियो । जसबाट उनले उत्कृष्ट प्रस्तुतिका लागि अवार्ड समेत हात पारेकी थिइन् । त्यसपछि उनी थुप्रै अवार्डका लागि मनोनित समेत भएकी थिइन् । उनले थुप्रै फिल्ममा अभिनय गर्न अवसर समेत प्राप्त गरिन् । त्यसैले उनको सम्पति यकिन नभएपनि विश्वका १० धनी बालकका रुपमा उनको नाम सुरक्षित रहेको छ ।
९) निक डालोइसियो
Nick D’Aloisio, founder of Summly,amobile application that summarizes news articles for small-screen devices, poses foraphotograph with his Apple Inc. iPhone in London, U.K., on Tuesday, March 26, 2013. Yahoo! Inc., the largest U.S. Web portal, is paying about $30 million to buy Summly,amobile startup run by 17-year-old D’Aloisio, according toaperson familiar with the transaction. Photographer: Matthew Lloyd/Bloomberg *** Local Caption *** Nick D’Aloisio
१९ वर्षीय डालोइसियो बेलायतका कम्युटर प्रोग्रामर हुन् । जब उनी १५ वर्षका थिए इन्टरनेट उद्यमी बनेका थिए । प्राविधिक रुपमै अब्बल डालोइसियोले समली भन्ने एपको निर्माण गरी ३ करोडमा याहुलाई बेचेका थिए । सानै उमेरमा गहकिला कार्य गरे बापत् उनलाई थ्प्रै सम्मान प्रदान गरिएको थियो । वाल स्ट्रिट जर्नलले उनलाई वर्ष प्रर्वतकको सम्मान प्रदान गरेको थियो भने टाइम्स म्यागजिनले प्रभावकारी किशोरको समेत पदक प्रदान गरेको थियो । हाल अक्सफर्ड युनिभर्सिटी अन्तर्गत कम्युटर विज्ञान तथा दर्शन पढी रहेका डालोइसियो स्वःनिर्मित करोडपति हुन् ।
१०) नक्स र भिभिन्ने जोली पिट
ब्रान्जिलिना भन्ने नाम नसुनेको को होला र ? नक्स र भिभिन्ने जोली पिट हलिउड जोडी ब्राड पिट र एन्जेलिना जोलीका जुम्ल्याहा सन्तान हुन् । जब सन् २००८ मा फ्रान्सको निसमा ती दुई जुम्ल्याहा बालकको जन्म भएको थियो तब विश्वका नामी मिडियाहरु जुम्ल्याहा बच्चाको एउटा फोटो खिच्न भनी गिद्ध सिकारलाई झम्टे जसरी अस्पतालमा झम्टीरहेका थिए । नक्स र भिभिन्ने जोली पिटको पहिलो तस्बिर एक करोडमा बेचाउमा राखिएको थियो जुन अहिलेसम्मकै महङ्गो सेलिब्रिटीको तस्बिरको बनेको थियो । विश्वको सबैभन्दा महँगा कलाकारको जोडिका यी सन्तान निःसन्देह विश्वका १० धनी बालकमा परेका छन् ।
फोब्स्र पत्रिकाको सहयोगमा अल्पविरामद्वारा अनुवादित तथा सम्पादित
:: सम्बन्धित शीर्षकहरु | slider रोचक बाट